Ciidammada Xoogga Dalka Soomaalieed ayaa saacadihii la soo dhaafay Howlgal ka dhan ahaa Al-Shabaab ka fuliyey degaano iyo tuulooyin ka tirsan gobolka Baay ee Dowlad Goboleedka koonfur Galbeed.
Howlgalka waxaa hogaaminayay Taliyaha Qeybta 60Aad ee Ciidanka Xoogga Dalka Janeraal Maxamed Sheekh Cabdullahi Ciirow waxaana laga fuliyey degaanada kala ah Eel- Dhuun Adeegow, Toos wine, Kurteela iyo Deegaano kale oo ku dhow Degaanka Goof Gaduud Buurey Ee Gobalka Baay.
Saraakiisha howlgalka hoggaamineysay ayaa waxaa ay sheegeen in Ciidanka Xoogga Dalka ay Howlgalka kusoo qabteen saraakiil iyo Xubno kale oo tirsan Al-Shabaab.
Taliyaha Qeybta 60Aad ee Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed Janaraal Maxamed Sheekh Cabdullahi Ciirow oo la hadlay Idaacada Ciidamada ayaa sheegay in Howlgalka lagu soo qabtay Saraakiil ay ka mid yihiin Sarkaalkii sirdoonka Al-Shabaab ee Gobolka Baay iyo Sarkaalkii Maaliyada Al-Shabaab ee gobolka Baay
Janaraal Maxamed Sheikh Cabdullahi waxa uu sheegay in magacyada Saraakiisha kale ee howlgalka lagu soo qabtay ay dib shacabka Soomaaliya ugu soo bandhigi doonaan .
Ciidamada Dowladda ayaa maalmihii la soo dhaafay waxaa ay howlgallo kala duwan ka wadeen degaano iyo degmooyin ka tirsa Gobolada Shabeellaha hoose iyo bay, iyada oo saraakiisha Ciidamada ay sheegeen in howlgallada looga hortagayo weerarada Al-Shabaab.
Previous articleMid kamid ah Golaha Wasiirada Puntland oo is casilay
Next articleBooliska Kenya oo helay Meydka Mas’uul degaan oo la gowracay